Ejipta : Kianjan’ny fahafahana, andron’ny fahafahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2011 8:21 GMT
Anisan'ireo lahatsoratra navoakanay manokana momba ny Fanoherana tany Ejipta 2011 ity.
Tonga teny amin'ny kianja Tahrir (Kianjan'ny Fahafahana) in-droa aho omaly, ny voalohany tamin'ny maraina, mialoha ny fialan'i Moubarak, taorian'ny kabariny ny omaly harivan'io, hoy Tarek Amr nitantara.
IlayEjiptiana mpihira sady mpitoraka bilaogy, Nadya Shanab, nitantara ny fiantraikan'ny kabary sy ny fanambarana nataon'ny tafika tamin'ireo vahoaka nihaino.
Niresaka tamin'ny vahoaka i Moubark omaly hariva ary nandeha be ny tsaho fa vita ny ady, hametra-pialana izy. Efa somary niresaka izay koa ny media iraisam-pirenena sasany sy ny loharanom-baovao maro fa ny hafa kosa nanambara hoe tsia, tsy hiala izy, tsy fantatr'izao tontolo izao izay hitranga.
Taorian'ny fahatarana ora iray dia nanomboka nikabary ihany i Moubarak. Tsy hiala izy. Tezitra be ny olona. Nihiakiaka sy nitoraka kiraro izy ireo nitaky ny fandehanan'i Moubarak. tsy nahita mangirana ny rehetra.
Tamin'ny maraina dia nanao fanambarana faharoa indray ny tafika, izay milaza fa hanohana an'i Moubarak hatrany izy ireo hanatanteraka ny fanavaozana ny lalàmpanorenana izay nekeny hatao vokatry ny fitakian'ny vahoaka ary manaiky koa izy hanatanteraka fifidianana malalaka sy mangarahara amin'ny volana Septambra. Fahadisoam-panantenana no teny azo anambarana ny fihetseham-pon'ny vahoaka taorian'ilay kabary.
Raafatology manazava fa tsy misy hafa amin'ireo kabary nataon'i Moubarak hatramin'izay iny kabary iny. Isaky ny miandry zavatra avy aminy ianao da zavatra hafa ny azy no teneniny.
Kabary mbola mandiso fanantenana iray hafa koa iny nataon'i Moubarak sy ny filoha lefiny iny. Nilaza i Moubarak fa tsy hilatsaka ho fidiana izy amin'ny fifidianana manaraka tahaka ny hoe safidiny izany. Nomeny ho an'ny filoha lefitra ratsy mitovy aminy ihany ny fanohizana ny asany rehetra.
Nifonan'i Moubarak ny vono olona nataony hatramin'izay, fa tsy nifonany kosa ny mbola hovonoiny raha mijanona eo amin'ny fitondrana izy.
Nanontany tena izy raha toa ka efa milalao ny karatra farany eny aminy i Moubarak..
Tsy fantatro mihitsy izay ao an-dohany ao ! Heveriny ve fa aorian'ny kabariny mampalahelo toy ireny dia handao ny kianja Tahrir ny olona ka handeha hamonjy fodiana ?
Toy ny mamaly ny fanontanian'i Amr Ezzat i Raafotology ary nanapa-kevitra ny hamaly azy ao amin'ny bilaoginy.
Toy ny tena tsara be ny nipetraka nanoloana ny tranobe Maspiro (Fahitalavitra Ejiptiana) omaly hariva.
Taorian'ny misasak'alina, rehefa vita ny kabarin'i Moubarak , izay sady nampalahelo no nandiso fanantenana, dia feno olona tezitra be ny kianja Tahrir. Tsy noheverina mihitsy ny fatran'ny fahamendrehana sy ny fahafahan'i Moubarak mijery ny zava-mitranga manodidina azy, noheverina fa mba manana fahamendrehana kely sy fahendrena bitika monja izy ka hanaiky tsy hifikitra amin'ny fitondrana intsony. Tsy nanaiky resy anefa i Moubarak, kanefa efa mihamandohalika manoloana ny fitakian'ny vahoaka any an-dalambe ihany izy izao : noho izany, mijanonà daholo eny an-dalambe.
Tena feno tanteraka ny kianja Tahrir araka ny efa nanampoizan'i Amr azy, araka ny fitantaran'i Tarek, kanefa nangina be tsy tahaka ny isan'andro ny vahoaka teny. Nijanona fotoana vitsivitsy teny aho ary avy eo nanapa-kevitra ny handeha hody. Mandalo eo amin'ny Maspiro ny làlako. Nisy olona mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy koa teo, tsapako ny fahadisoam-panantenany noho ny tsy nahatrarany ny tanjona niriany, dia ny hanongana ny fitondrana izany. Afaka kelikely, teny an-dàlana mankany an-trano, dia henoko tao amin'ny radio nolalovako fa voatery nametra-pialana i Moubarak. Tsy nino avy hatrany aho. Nihazakazaka nody aho ary avy hatrany dia nijery ny vaovao rehetra tamin'ny fahitalavitra, tamin'ny twitter, sy ny bilaogy araka izay tratrako.
Ireo vahoaka Ejiptiana nifety tao an-kianjan'ny Tahrir taorian'ny naneren-dry zareo an'i Moubaraka hiala.
Saripika nalai'i Ramy Raoof mampiasa ny Creative Commons license
Feno fifaliana be ny tontolon'ny bilaogy ejiptiana, ary samy neneho izany tamin'ny fombany daholo ny tsirairay. Ny sasany, toy ny Egyptian-Wish, nirehareha tamin'ny zava-bitany ary faly hiatrika ny ho avy.
Misaotra an'andriamanitra lehibe aho tamin'ny nanampiany anay hanafoana ny tsy fahamarinana amin'ny teny farafahakeliny iray monja ato amin'ny bilaogiko.
Mino aho fa tsy hisy intsony Ejiptiana hogadraina noho ny heviny.
Mino aho fa tsy hisy intsony Ejiptiana hampijaliana any amin'ny paositry ny polisy
Mino aho fa tsy hisy intsony Ejiptiana hoverezin-jo
Miandry governemanta hiasa ho an'ny vahoaka izahay, fa tsy izahay no hiasa ho azy
Ny hafa tahaka an'i Zeinobia tsy nahitana teny firy.
Tsy fantatro intsony izay hosoratako, tsy haiko ny milaza izay ao anatiko ao, ankoatry ny fangatahako ny mpiserasera amin'ny twitter rehetra sy ny mpitoraka bilaogy rehetra, tsy mendrika ny fanasohasohana ataonareo aho, zazavavy miaraka amin'ny solosaina ihany aho izay nanomboka ny fihetsiketsehana tamin'ny 25 janoary 2011. “Tsy tonga teny amin'ny kianja Tahrir akory aho, nijanona tato an-tranoko tato foana nanohy ny ady niaraka tamin'ny solosainako”. Ny tena mahery fo dia ireo novonoin'i Moubarak, ireo izay nampanadino ny tahotra, ny fahanginana sy ny fihatsarambelatsihy tato anatintsika tamin'ny alalan'ny ràny.
Ny hafa toa an-dry Mohaly, ankoatry ny fampijaliana sy ny kolikoly, dia nino tanteraka fa ho to ny nofinofiny indray andro any.
Nanantena an'i Ejipta foana aho ary tia azy na dia nandrabiraby ahy aza ny sasany tamin'ireo namako satria nasiako sainam-pirenena tao an'efitranoko, ary hira maneho fitiavan-tanindrazana tao anaty fiarako, nolaviko ny tolotr'asa nanome ahy karama avo telo heny tany Royaume Uni sy ny tany amin'ny Golfe, nampianatra maimaim-poana aho ary nisolo toerana an'i Nadhet El Marhousa. Kanefa ireny rabiraby ireny no vao maika manome hery ahy, ary ny fahafatesan'i Khaled Sa3eed no kihon-dàlana. Hatramin'ny nahafatesany mantsy dia nanapa-kevitra ny hiteny aho ary tsy hatahotra intsony.
Ary ny sasany toa an'i Raafatology mbola tsy mino ihany.
Tsy ninoako mihitsy izany hoe mbola velona aho amin'ny andro hahafahako miteny hoe: ny filohanay taloha!!!!!!!!!
Rehefa avy eo, araka ny fitantaran'i Tarek Amr, dia nanapa-kevitra ny hiverina eny amin'ny kianja Tahrir aho, amin'ity faharoa ity kosa dia mba handray anjara amin'ny fety. Vao nivoaka fotsiny anefa aho, dia hitako fa tsy hiandry ho tonga eny amin'ny kianja Tahrir akory vao hahita fifaliana, satria hitako avy any an-tranoko izay miala kilometatra maromaro avy eo ny zava-miseho. teny an-dalana rehetra teny mandrapaha-tongako teny amin'ny kianja Tahrir, mihirahira ny olona, mandihy ary manofahofa sainam-pirenena. Hatramin'izay mantsy dia manao fety tahaka ny eny an-dalambe ny olona rehefa mandresy amin'ny baolina kitra, fa omaly kosa dia olona be dia be no teny an-dalana, tena faly be, ary nanao fety be mihoatra noho ny amin'ny baolina kitra.